नायिका करिश्मा मानन्धर बुढी हुदैनन् की क्या हो ? हेर्नुहोस् लोभलाग्दा तस्बिरहरु – Namaste Host
February 7, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on नायिका करिश्मा मानन्धर बुढी हुदैनन् की क्या हो ? हेर्नुहोस् लोभलाग्दा तस्बिरहरु
पछिल्लो समयमा करिश्माले दैनिक सामाजिक सञ्जालमा राख्ने तस्विरहरुले पनि देखाउछकी ढल्किँदै गएको उमेरमा उनको सुन्दरता बढेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
कक्षा ८ सम्म मात्र अध्ययन गरेकी करिश्माले १ वर्ष अगाडी एसएलसी परिक्षा उत्तिर्ण गरेकी हुन् । २०७५ सालको एसईई परिक्षार्थी भएर करिश्माले बी प्लस ल्याएर उत्तीर्ण गरेकी थिइन् ।
केहि दिन आघि आफूलाई श्वेता खड्का सहितले गा’ली’ग’लौज र कु’ट’पि’ट गरेको भन्दै नायिका सुष्मा कार्कीले प्रहरीमा उ’जुरी दिएकी थिइन् । अभिनेत्री श्वेता खड्का, पति विजयेन्द्र राउत, बहिनी आरती खड्का र पत्रकार उत्सव रसाइलीले कु’ट’पि’ट गरेको भन्दै कार्की प्र’हरी समक्ष उ’जुरी लिएर दरबारमार्ग सम्म पुगेकी थिइन् ।
सुष्माले सोमबार साँझ लन्डन पब क्याफेमा आफूमाथि कु’ट’पि’टको घ’टना भएको दाबी गरेकी सुस्माले बताएकी थिईन । सुष्माको दाबीको सत्यता बुझ्न प्र’हरीले सिसि’टिभी फुटेज मगाएर हेर्दा इकागजले प्राप्त गर्यो । ‘सीसीटीभी फुटेजमा सुरुमा सुष्मा र पत्रकार उत्सव रसाइलीबीच विवा’द भएको देखियो । पछि उत्सव अर्कोतिर लागे पछि श्वेताको बहिनी आरती खड्काले सुष्मालाई भु’त्ल्या’एको देखिएको थियो ।
यहि कुरामा सुष्माले एक अन्तर्वा’र्ता खुलाएकी छिन । श्वेताले आफ्नो बहिनीलाई कु’ट्न लगाएको आ’रोप लगाउदै खड्का र उनको सा’थमा रहेका पति तथा बहिनीले कु’ट’पि’टसँगै आफूलाई तथा’नाम गा’ ली गरेको र अ’प’श’ब्द प्रयोग गरे । मैले पनि एक च ड्न त् ह न्न सक्थे नि तर मैले त्यसो गरिन भन्दै आईन मिडियामा हेर्नुहोस पुरा भि’डियोमा :